तयार हुनुस एफपीओ भर्न, लघुवित्तले ल्याउनेवाला छ एफपीओ - Khabar of Nepal
एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एफपीओ(फर्दर पब्लिक इस्यु) निष्कासन गर्ने प्रस्ताव विशेष साधारण सभामा लैजाने भएको छ । उक्त कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न आगामी भदौ २० गते विशेष साधारण बोलाएको हो । सो सभाले पारित गरेपछि नियामक निकायको स्वीकृति पछि कम्पनीले एफपीओ विक्रीमा ल्याउने छ ।
कम्पनीले विशेष सभा कैलालीको धनगढीस्थित होटल साथीमा विहान ११ बजेबाट शुरु गर्दैछ । सभामा आगामी चार वर्षको लागि चार जना संस्थापक र दुई जना सर्वसाधारण शेयरधनीसमेत गरी छ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
सभामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कम्पनीको नाम र ठेगाना परिवर्तन गर्नका लागि नियमावली र प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि छ । सभामा कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–९, काठमाडौंमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
साविकको किसान र दिव्य लघुवित्त मर्ज अनुमोदन गर्ने एजेन्डा पनि छ । उक्त कम्पनीले यसअघि क्रिएटिभ लघुवित्त र रामारोशन लघुवित्तलाई आफूमा समाहित गरिसकेको छ । त्यसलगत्तै कम्पनीले अन्य स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका किसान लघुवित्त र दिव्य लघुवित्त पनि गाभेर गत असार २९ गतेबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरिसकेको छ । विभिन्न लघुवित्त कम्पनीलाई गाभेर एनआरएन लघुवित्तले सोही नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू.५२ करोड रहेको छ ।
लामो समय पछि सूचीकृत भयो माइक्रोफाइनान्सको बोनस सेयर, तपाइको खातामा आयो ?
Khabarofnepal - December 1, 2020 0
फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३२ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत गराएको छ । मंगलवार कम्पनीले उक्त बोनस...
युनाइटेड इदी मार्दीको आईपीओ बाँडफाँट, तपाइलाई पर्यो कि परेन हेर्नु भयो ? यहाँबाट हेर्नुस
युनाइटेड इदी मार्दी एण्ड आरवि हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । आवेदकहरुले ८१ हजार २७३ जनाले १० कित्ता शेयर पाएका छन् । कम्पनीको आईपीओमा...
जलविद्युत कम्पनीको १४ प्रतिशत बोनस शेयर पारित, कहिले पाउला लगानीकर्ताले ?
Khabarofnepal - November 26, 2020 0
अपि पावर कम्पनीले दुई ओटा आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले भर्चअल माध्यमबाट मंसिर ८ गते आव २०७५/ ७६ को र...